“ရှိတယ်”… – PVTV Myanmar
Like – 4.2K Share – 343
Myanmař Saw Taw Gyî says:
2021-04-24 at 7:54 PM
ရေဒီယ်ိုလေ မြန်မြန်လုပ်ပေးပါဗျာ နယ်တွေဘက်မှာ internet အရမ်းခက်ခဲနေလို့ပါ
Han Hsu Lay says:
ယနေ့ အာဆီယံ အစည်းဝေးက
တရုတ် မအလတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး
အာဆီယံဆိုတာ ကလိမ်ကကျစ် အဖွဲ့အစည်းပါပဲ
2021-04-24 at 7:59 PM
UN Asean​ရော၂ခုလုံး မလိုချင်ပါဘူး မြန်မာ့အ​ရေးကို မြန်မာ​တွေပဲဆုံးဖြတ်မယ် တိုက်ဖို့သာလုပ်​ပေးကြပါ
ဘယ်ညှိနှိုင်း​ရေးအဖွဲ့မှလည်းမလိုချင်ပါဘူး မအလတဖွဲ့လုံး အမြစ်ပြုတ်ဖို့ပဲလိုချင်ပါတယ်
HninHnin Soe says:
2021-04-24 at 8:35 PM
ပြည်သူတွေနဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရ မှာ စည်းလုံးမှု၊ ကြိုးစားမှု ၊ အားထုတ်မှု ရှီတယ်။
ဒါကြောင့် အရေးတော်ပုံ အောင်တော့မညိ။
2021-04-24 at 8:50 PM
(FTTH တောင် မသေချာတော့)
ဒါကို US, UN အပါအဝင်
ဘာလဲ ဘယ်လဲ မေးခွန်းထုတ်ဖို့
Diplomatic way ကုန်ပါပြီ..
Immediately take action ကလွဲ
2021-04-24 at 8:55 PM
ASEAN က ဝင်ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုပြီး
ဖြစ်လာဖို့က 100% ပါပဲ။ ခုတောင် ဒီစနစ်ကို
စတင် အကောင်အထည်ဖော် အသက်သွင်းနေပြီဖြစ်လို့
တရုတ်အလိုကျ ASEAN က ဖောရှောလုပ်ပြီး အနဲဆုံး
ငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေ ဘဝကတော့ အင်တာနက်ကို
whitelist နဲ့ သုံးနေရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာကြီးနဲ့
အဆက်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် NUG အနေနဲ့
Dr Sa Sa ပြောခဲ့သလိုပဲ ပြတ်ပြတ်သားသား
ချစ်ကို ကြီး says:
2021-04-25 at 6:34 AM
Htet Htet Zaw Latt says:
2021-04-25 at 10:03 AM
ရှက်စရာကောင်းလှတဲ့ ASEAN !!!
ဘုံသဘောတူညီမှု(Concensus)အရ ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက် (၅)ချက်ထဲမှာ ….
(၁) စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း လုံးဝ မပါဝင်ပါ။ (တစ်ကမ္ဘာလုံး Condemned , Against Military Coup လို့ တွင်တွင်အော်ပြီး ရှုံ့ချကန့်ကွက်နေကြတာတောင် အာဆီယံ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးက လူပေါင်း ၇၅၀ ကျော်သတ်ပြထားတဲ့ မင်းအောင်လှိုင် ရဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုံ့ချပါတယ် “Condemned ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတစ်လုံးတောင် မထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ပါ)
(၂) DASSK နဲ့ သမ္မတကြီးတို့အပါအဝင် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအားလုံး ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ (၅)ချက်ထဲမှာ မပါဝင်လာခဲ့ပါဘူး ။ (မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင် မပြောနိုင်တဲ့ အာဆီယံ ကြီး 🤨 So Shame)
(၃) ထုတ်ပြန်ချက်ထဲက နံပါတ်(၁)အချက်အရ “သက်ဆိုရာအဖွဲ့များအားလုံး အကြမ်းဖက်မှုကို ရပ်တန့်လျှော့ချရန်” ဆိုတော့ အကြမ်းဖက်နေတာ စစ်ကောင်စီတပ်ပဲ မဟုတ်ပဲ ပြည်သူတွေပါ ပါနေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောထုတ်ပြန်သွားတာပါ ။
(၄) ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း လုံးဝ(လုံးဝ)မပါဝင်ပါ။
(၅) ရွေးကောက်ခံအစိုးရကို အာဏာပြန်လွှဲပေးရန်လည်း လုံးဝ မပါဝင်ပါ။
(၆) စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ တရားလက်လွတ် သတ်ဖြတ် ၊ ညှင်းပန်း ၊ နှိပ်စက် ၊ လုယက်မှု တို့အတွက် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု လုံးဝ မပါဝင်ပါ။
(၇) စစ်ကောင်စီကို ကျားကန်ပေးရုံ ၊ အချိန်ဆွဲပေးရုံ သက်သက် နဲ့ စစ်ကောင်စီကို အသက်ရှူချောင်အောင် Cover လုပ်ပေးသည့် ထုတ်ပြန်မှုများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ် ။
(၈) ထုတ်ပြန်ချက်အရ အာစီယံက intervention ကြားဝင်ပြီး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (ASEAN Envoy)မြန်မာပြည်ထဲ လာပါဦးမယ် ။ ဒါဟာလည်း သက်သက် အချိန်ပုပ်အောင် အချိန်ဆွဲပေးချင်တဲ့ စောက်ကျင့်ယုတ်မှုဖြစ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ UN တို့ရဲ့ မြန်မာ့အရေးကိုပါဝင်ကူညီမှုကိုပါ သူတို့ကရှေ့ကနေ ကန့်လန့်ခံနေသည့်အတွက် နှောင့်နှေးသွားစေပါလိမ့်မယ် ။
(၉) NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကလည်း အာဆီယံရဲ့ ဒီသတိထားရမယ့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ “Delay Tactics” တွေ “Delay Strategy ” တွေ နဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုံးတွေကအစ သေသေချာချာ သတိထားတုံ့ပြန်ရမယ် လို့ သူမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ရေးသားထားပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အာဆီယံရဲ့ Concensus ထုတ်ပြန်ချက်(၅)ချက်ဟာ အင်မတန်မှရှက်စရာကောင်းလှပြီး ငါတို့လုံးဝလက်မခံပါ ။
(But – အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ဂျိုကိုဝီဒိုဒို နဲ့ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မူဟစ်ဒင် တို့ရဲ့ Strong ဖြစ်တဲ့ Private သဘောထားတွေကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်)
Daw Sandar says:
2021-04-25 at 10:07 AM
2021-04-25 at 7:51 PM
2021-04-26 at 10:20 AM
Bursting forth across this land
Barricaded with barbed-wires
Tiny shoots are flourishing
And they will be here tomorrow
These shoots, by nature, gaze up at the sky
By nature they wither in the shadow of the mountain
They strive to rise up in silent revolution
Defying efforts to flatten and crush them
These tiny shoots ripen across the land
Bearing the bruises and wounds of all the violence they have suffered
Some plants are soaked, in blood not water
Some plants barely bloom, shut behind windows, in the darkness.
Some plants, muzzled, are forced to bear fruit
These tiny shoots dance, sprightly,
Hoping for sunshine in this cold unpleasant place
Lightning bolts brighten the darkened windows
Unlocking. The thunder is the key
Time for the luminous stars to twinkle, dream-like.
A chance to stretch out underawaxing moon and join hands
Strong roots firmly grip the soil and reaching out with many twisting branches,
Standing up as one.
The struggle in these green cells is what makes us strong
This love, sublime, the world over, isastart.
And so this wonder of nature, amid loving comrades, thrives.
From one plant springs forth
Two, Three, Four, Five, Six more.
From one little wood come many, many forests
Little by little, they rise up
Every plant in nature hasadream. For sure.
Chwe Suu says:
2021-04-27 at 8:59 AM